Eklesia Episkopaly Malagasy - Wikipedia
Ny Eklesia Episkopaly Malagasy, hafohezina amin' ny hoe EEM, dia anarana iantsoana ny Fiangonana anglikana eto Madagasikara .
Tany am-piandohana dia mbola Diosesy tokana ny teto Madagasikara ka nantsoina hoe Diosesin' i Madagasikara. Tamin' ny volana Janoary 1969 kosa no nanambarana tamin' ny fomba ôfisialy tao amin' ny Katedraly Santa Laurent Ambohimanoro ny fizarany ho Diosesy telo eto Madagasikara dia ny Diosesin' Antananarivo, ny Diosesin' Antsiranana ary ny Diosesin' i Toamasina. Nijoro tamin' izany fotoana izany ihany koa ny Foibe Eklesia Episkopaly Malagasy.
Ankehitriny dia Diosesy enina no mandrafitra ny EEM, dia:
ny Diosesin'i Toamasina,
ny Diosesin'i Mahajanga,
ny Diosesin'i Fianarantsoa,
ny Diosesin'i Toliara.
Ny Foiben' ny Eklesia Episkopaly Malagasy (FEEM) no rafitra mampivondrona azy ireo, izay tarihin' ny filohany ankehitriny dia ny Mgr Ranarivelo Samoela Jaona, Evekan' ny Diosesin' Antananarivo. Ny EEM dia mpikambana eo anivon' ny Fiombonan'ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara (FFKM).
Marihina fa ireo Diosesy malagasy, miaraka amin' ny Diosesin' i Maorisy sy Seisely no mandrafitra ny Eklesia Anglikana eo amin' ny Ranomasimbe Indiana, tarihin' ny Arseveka ankehitriny Sa Grâce Mgr James Wong, ary miombona ao amin' ny Firaisambe anglikana na Fiombonam-be anglikana (Anglican Communion) izay mampifandray ny Anglikana maneran-tany.
Tranonkalan'ny Diosesin'Antananarivo Archived Aogositra 4, 2018 at the Wayback Machine: http://eemantananarivo.com Archived Aogositra 4, 2018 at the Wayback Machine
↑ 1,0 et 1,1 https://www.worldanglican.com/madagascar/tananarive/the-church-of-the-province-of-the-indian-ocean/the-rt-revd-samoela-jaona-ranarivelo
↑ http://dioceseoftoliara.org/2016/08/11/a-brief-history-of-the-diocese-of-toliara/ Archived Jiona 25, 2018 at the Wayback Machine
↑ "Fifaneken'ny Fiangonana Anglikana" ao amin'ny Anglican Communion. (Jereo ny andininy faha-4 ao amin'ny takila faha-2 ao amin'ilay takelaka PDF.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Eklesia_Episkopaly_Malagasy&oldid=1018837"
Dernière modification le 11 Aogositra 2021, à 22:30
Voaova farany tamin'ny 11 Aogositra 2021 amin'ny 22:30 ity pejy ity.